I-Google Maps izokhombisa uma ngabe izindawo zifinyeleleka kubasebenzisi | Izindaba zamagajethi
I-Google Maps izokhombisa uma izindawo zifinyeleleka ngesihlalo sabakhubazekile
I-Google Maps iyaqhubeka nokuthola ukusebenza, futhi ukuthi imephu ye-Google kanye nensizakalo yokuhamba iye yaba yinto ebalulekile empilweni yansuku zonke yabangaphezu kweyodwa, ikakhulukazi ngoba inamandla nolwazi lwenjini yayo yokusesha, enothisa ngaphandle kokulingana nohlelo lokuzula , yize futhi inamaphutha ayo, njengakho konke okukuleli zwe elisizungezile. Noma kunjalo, Ukwenziwa okusha kwamuva okuvela kuGoogle Maps sonke siyakuthanda, futhi lokho kuzobeka uphawu lokuthi uma indawo ingafinyeleleka ngesihlalo sabakhubazekile, esizosiza ezinhlelweni zabasebenzisi abanobunzima bokuhamba, noma ukunciphisa ukuhamba.
Lo msebenzi, obonakala ulula kangaka, ungabalulekile empilweni yansuku zonke yalaba basebenzisi esibhekise kubo. Futhi ukuthi sisesikhathini lapho zonke izindawo kufanele zifinyeleleke kubasebenzisi abanokuhamba okuncishisiwe, okungenani ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, iqiniso lihluke kakhulu, ngoba ngisho neMetro Madrid ayitholakali ngokuphelele kubasebenzisi abanokuhamba okunciphileUkuba wumsebenzi wezokuthutha zomphakathi, singalindela okuthe xaxa kwezinye izindawo ezizimele.
Okwamanje lo msebenzi uyanda kulo lonke elase-United States of America, lapho kwamukelwa khona ngempela. I-Google inkampani ezibophezele ekufinyeleleni, ikakhulukazi ngenxa yezinqubomgomo zayo zokuhlanganisa abantu abanamakhono ahlukahlukene enkampanini yakho. Okwamanje, le misebenzi engaphansi kokuthuthukiswa izonwetshwa iye kwezinye izindawo lapho iGoogle Maps inendawo, okwenza impilo ibe lula, hhayi kuphela kulabo abahlangabezana nokuhamba okunciphile, kepha nemindeni enamalungu akhubazekile ngisho nabesifazane okufanele baphathe okwakudala ikalishi lezingane, konke kuzoba lula ngale misebenzi emisha yeGoogle Maps.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-Google Maps izokhombisa uma izindawo zifinyeleleka ngesihlalo sabakhubazekile
Ngingomunye walabo abazinikele ekubuyekezeni ukuthi izindawo zomphakathi zinokufinyelela okuhle kwabantu abakhubazekile eningizimu yeSpain naseLevante.
Kungenzeka ukuthi izovela ku-Maps of Spain maduzane.
Ama-Xiaomi Smartphones azobuyekezelwa ku-Android 7.0